Gariiradda Birta Galvanized, Gariiradda Birta Zm, Gariiradda Birta Aluminium-Zhanzhi
ZZ GROUP (oo u gaaban kooxda Zhanzhi)
ZZ Group waxaa la aasaasay horraantii 1980-meeyadii, oo ku yaala degmada Shanghai Yangpu, waa koox ganacsi oo ballaaran, oo isku dhafan ganacsiga birta, diyaarinta iyo qaybinta birta, alaabta ceeriin, horumarinta hantida maguurtada ah, maalgashiga maaliyadeed iyo warshadaha kale.Caasimada diiwaan gashan waa 200 milyan RMB.
Sida warshadaha alaabta biraha China keentay shirkadaha, ganacsiga birta qaranka iyo saadka "Boqolaal ganacsi iimaan wanaagsan", shirkadaha ganacsiga birta Shiinaha, "Top 100 shirkadaha gaarka loo leeyahay ee Shanghai".
Mugga Iibka Sannadlaha ah
Isbeddelka Sannadlaha ah
Waxaa jira 6 xarumood oo bakhaar iyo warshadeyn ah oo loo qaybiyay dalka oo dhan (waxaa weli jira 2 warshadood oo diyaarinta ah), oo lagu qalabeeyay wadarta 30 qabow oo toos ah iyo duub kulul iyo dhogorta wax soo saarka ee noocyada safka hore (oo ay ku jiraan 5 oo la dhisayo).Alaabtu waxay dabooshaa saxan bannaan oo kulul oo duuduuban, xoog-kulul kulul oo kulul, xoog-qaadis sare leh, saxan bannaan oo qabow-duuban, dahaar, bir aan lahayn, iwm.;
Hal khad wax soo saar ah oo loogu talagalay daaweynta dusha sare ee taarikada iyo profiles;
2 qaybood oo ah qalabka wax lagu dhejiyo ee hydraulic;
2 qaybood oo ah mashiinnada dhogorta tooska ah ee saxda ah;
Labeen laba-dhinac ah oo qabow-duuban, dahaarka leh, birta aan fiicnayn iyo alaabada kale;
Soo bandhigida ugu dambeysay ee tignoolajiyada heerkulbeegga kulul ee la isku habeeyay ee xoogga sare leh, foorarsigu ma dillaacdo, goyntu ma dhimayso;
Qalabka farsamaynta qaboojiya ee summada line-ka ah, oo leh caymis ballaaran oo badeecada iyo saxnaanta farsamaynta sare.
Wadarta guud ee bakhaarku waa ku dhawaad ​​3 milyan oo mitir oo laba jibbaaran;
Wadarta awoodda kaydinta sanadlaha waxay ku dhowdahay 10 milyan oo tan;
Tiro ka mid ah xarumaha farsamaynta iskaashiga istiraatijiyadeed;
Abuur qaabka silsiladda sahayda ee is dhexgalka kheyraadka iyo isdhexgalka labada dhinac;
In ka badan 20 kaabayaal iyo bakhaarro, oo leh ganacsi daboolaya in ka badan 20 gobol iyo magaalooyin dalka iyo suuqyada dibadda;
Waxa ay samaysay shuraakooyin istiraatijiyadeed oo leh in ka badan 20 warshadood oo birta caadiga ah ee Shiinaha, iyada oo u adeegta daraasiin warshado ah, iyo xaqiijinta daboolida buuxda ee beerta baahida birta warshadaha.
Kooxda adeegga farsamada ee xirfadlayaasha ah oo leh asalka warshadaynta birta:
Xulashada macaamiisha agabka, agabka, cusboonaysiinta iyo talooyinka beddelka;
Kobcinta habka alaabta macaamiisha, hagaajinta tayada iyo hagaajinta;
Adeegga baadhista iyo falanqaynta hantida maadiga iyo kiimikaad;
Tababarka aqoonta farsamada ee macaamiisha.
Adeeg hal joogsi ah
Qorshe qaybin oo kala duwan
Adeeg hal-joojin ah oo loogu talagalay habaynta, qaybinta, kaydinta iyo gaadiidka.
Saxanka: Ka faa'iidayso kanaalada wax iibsiga si aad uga caawiso macaamiishu in ay si hal mar ah u dalbadaan.U oggolow macaamiishu inay ku raaxaystaan ​​adeegga hal-joojin ah, muddada caadiga ah waa 2 bilood.
Impawn: Marka loo eego baahida macaamiisha, xalliso raasamaal-yaraanta muddada-gaaban ee macaamiisha iyo baahiyaha kale ee wax-soo-saarka ganacsiga caadiga ah (alaabadu ma xaddidna).
Kordhinta amaahda: Iyada oo ku saleysan deynta macaamiisha, bixi qaddar cayiman oo deyn ah, oo samee ganacsi deyn ah.
Maaliyadda silsiladda sahayda: Adeegga xidh-xidhan ee habka ganacsiga wax-soo-saarka ee ay si wadajir ah u abuuraan iibsadaha iyo alaab-qeybiyeyaasha si ay si wadajir ah u kormeeraan shirkadaha, shirkadaha caymiska, iyo bangiyada.
G550 Galvalume Aluzinc Dahaarka Birta Gariiradda
-Iibinta ugu Wacan Shiinaha PPGL Midabka Dahaaran ee Birta Dahaarka leh
Warshada Iibinaysa Shiinaha Zn-Al-Mg Dahaarka Birta Zinc Aluminium Magnesium Steel Coil
Midabka Cagaaran xaashida saqafka birta ee Dahaarka leh ee Aluzinc ee Peru
RAL 9001 Midabka Dahaarka leh ee PPGL Birta Birta ee Saqafka
Waraaqda saqafka sare ee buluuga ah ee Gi- saqafka ah ee loogu talagalay Afrcia
0.12mm xaashida birta galvanized Gi galvanized ee Afrcia
Xarigga birta Galvanized ee Samaynta Dhuumaha
Z275 Galvanized Steel Coil oo leh spangle weyn
Warqadda Saqafka ee Birta ee GL Galvalume ee Peru
AZ150 Galvalume Aluzinc Sheet Dahaarka leh
A463 Aluminized Hot Dip Aluminium Dahaarka Birta Gariiradda
Saxanka Birta HRC ee Kulul ee Q345 ee Buundada
1000mm Gariiradda Birta ee HRC ee Baabuurta
P20 Mold Steel ee Kaabista
Tayada Sare DC07 DC06 Shiinaha Birta Birta Gariiradda Hoose Kaarboon Qabow duuban oo bir ah DC01
0.5mm Gariiradaha birta ah ee crca la duubay ee madow ee la shiiday
ST12 CRC bir duuban oo qabow
DC01 CRC qaboojiyaha birta duuban
Garvanized Steel Bracket For Frames
Xirmada Sheet Birta Z ee Qabow Samaysan ee Dhismaha
Qabow Sameeyay U Biraha Sheet Pile ee Mashruuca
Xirmooyinka xaashida birta ee Z ee kulul
SY295 Hot Rolled U Steel Pale ee Dhismaha
Qabow Samaysan OZ Combi Walls Steel Sheet Pile
Bir Wareegta ah ee Qalabka Samaynta
Birta T Bar AS 4680 ee Australia
Tareenka Birta TR45 ee Jidka Tareenka
Steel i Beam 36a Cabirka Dhismaha
Birta H Beam ee Dhismaha
Bir fidsan Bar Q235B ee Dhismaha
Steel U Channel ASTM a36 ee Australia
Gi Steel C Purlin oo loogu talagalay Tracker Solar
Sawirka Voltaic Bracket for Solar Panel
Taxanaha Ilaalada Xawaaraha Sare ee Badbaadada
Bar xagasha birta ah ee Qabow Samaysan ee Rack Kaydinta
Dhuumaha birta ee Square Black For Furniture
SSAW Spiral Welded x42 Dhuumaha Birta
BS 1387 Dhuumaha Wareegga ah ee Galvanized Hot
Dhuumaha Birta ee Qabow ee Ecuador
301 Stainless Steel U channel ee Dhismaha
316 Bar xagasha birta ah ee Dhismaha
201 Dhuunta Birta Aan-Aabaha ahayn ee Malaysia
304 Dhuumaha birta aan Xumaan lahayn ee Warshadaha
316L 0.01mm Foil-ka Aan-Aabaha ahayn ee Baabuurka
304 Xarig bir ah oo Aan lahayn oo leh dusha sare ee timaha
316 xaashi bir ah oo aan lahayn dusha sare ee 2B
Xaashida aluminium ee muraayadda loo dhammeeyey ee sanduuqyada dahabka ah
1050 Gariiradda Aluminium ee Laambadaha
8011 Foornada Aluminium ee Diyaarsan ee Xidhmada Cuntada
1050 Dhuumaha Aluminium ee Baabuurka
1060 xagal aluminium ah oo loogu talagalay qurxinta
3003 Aluminium Profiles for Furniture
8011 Foil Aluminium ee Xidhmada Cuntada
Birta T Deedka Boostada oo leh Xoog Sare
Q235 Isku-laabashada Birta La Sili karo
Isku-duubnida Qaab-dhismeedka Birta leh Duty Culus
Qalabaynta Ringlock ee Galvanized ee Dhismaha
Qiimaha macquulka ah ee China A36 Galvanized Steel Daloolin Sheet bir ah
Mesh Birta Galvanized Steel Silig ee Australia
Qaybaha qaab dhismeedka birta oo leh cufan sare
Sagxada Timaha Birta ee Dhismaha
Sheet-ka-laabashada birta ee alxanka leh
Q235 10mm Birta siliga birta
ASTM A416 Steel Strand ee Warshadaha
Boostada xayndaabka fagaaraha budada ee dahaarka leh ee Australia
HAWLGALINTA Alaabooyinka Birta
Wararkii ugu dambeeyay ee blog-keena